Xiaomi waxay horeyba uga shaqeyneysaa taleefankeeda gacanta oo isku laaban | Androidsis
Xiaomi sidoo kale waxay ku shaqeysaa taleefankeeda isku laabma
Eder Ferreno | | Noticias, Xiaomi
Telefoonka isku laaban waa hamiga weyn ee noocyada suuqa casriga. Shirkado aad u tiro badan ayaa ku soo biiraya isbeddelladan waxayna bilaabeen inay soo saaraan qalabkooda isku laaban. Samsung oo leh Galaxy X (ma aha magaca ugu dambeeya) waa suurtogalnimada magaca ugu caansan ee arrintan la xiriira. Oo hadda waxaan ku dari karnaa magac cusub liiska. Sababtoo ah Xiaomi waxay horey u soo saartay qaabkeeda.
Xiaomi waxay durbaba ka shaqeyneysaa taleefankeedii ugu horeeyay ee isku laabmaya. Tani waa macluumaad horeyba u yimid saacadihii ugu dambeeyay waxayna muujineysaa qorshooyinka astaanta ee arrintan la xiriirta.
Sidan oo kale, soo saaraha Shiinaha ayaa horeyba ugu biiraya liis dheer oo noocyo ah kuwaas oo hadda horumarinaya taleefankooda isku laaban. Moodalkan waxaan horeyba u haynaa xoogaa xog ah, inkasta oo aanu aad u cayiman. Taas ayaa noo oggolaaneysa inaan ka helno fikrad qallafsan oo ku saabsan arrintaas.
Qalabkan Xiaomi wuxuu kaga duwanaan doonaa moodooyinka kale ee suuqa ku jira sida uu isku laaban lahaa. Sida waxay u egtahay in qalabkani iskalaaban lahaa. Sidan oo kale, naqshadeynta taleefanka ayaa noqon doona mid aad u tiro badan. Intaa waxaa dheer, waxay ballan-qaadday inay noqonayso taleefan aad u jaban marka loo eego qiimaha.
Xilligan la joogo ma hayno xogta taariikhda la sii daynayo. Xataa haddii Xiaomi waxay bilaabi kartaa wax soo saar si dhakhso leh. Waxaa la sheegay in sumadda Shiinaha ay hadda wadahadallo la leedahay alaab-qeybiyeyaasha. Astaamo caddeyneysa in horumarka taleefanka horay u horumarsan yahay. Oo waa inay dhaqso u bilaabaan soo saarkeeda.
Ma hayno taariikho ay bilaabeyso, inkasta oo ay tahay inay soo gasho suuqa sanadka soo socda. Waxaan rajeyneynaa inaan si dhakhso leh xog uga helno taleefankan isku laaban ee ka socda Xiaomi oo aan aragno nidaamka ay u sameysay sumadda Shiinaha. Maaddaama ay ballanqaadayso inay noqon doonto qalab wax badan ka talin doona.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi sidoo kale waxay ku shaqeysaa taleefankeeda isku laabma
OnePlus 3 iyo 3T waxay heli doonaan Android P
Sony Xperia XZ3 ayaa lagu soo waramayaa in lagu soo bandhigay TENAA